မောင်စေတနာ: ဆက်ဖတ်ရန် (သို့) ပြန်ခေါက်ရန်
ဆက်ဖတ်ရန် (သို့) ပြန်ခေါက်ရန်
ကဲ အားလုံး တမ်းတနေတဲ့ အရာလေး လာပါပြီ။ မိမိရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးမှာ စာပိုဒ်တစ်ဝက်ပဲ ဖော်ပြီး တစ်ဝက်ကို ခေါက်သိမ်းထားမယ်။ ဖတ်ချင်တဲ့သူက ဆက်ဖတ်ရန်ဆိုတဲ့ စာလေးကို Click လုပ်မယ်။ စာတွေ ကျလာမယ်။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီ လုပ်နည်းလေးလေ။
ကိုရန်အောင် ဘလော့မှာ ညွှန်းထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အဲဒီက ယူတာပါ။ ဒါပေမယ့် မအောင်ခဲ့ဘူး။ အခု ထပ်လုပ်တယ်။ ကိုရန်အောင် နည်းကို ပြန်ယူတယ်။ လိုအပ်ချက်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ရှာခဲ့တယ်။ တွေ့တယ်။ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် သိလာတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြန်ပြောမယ်။ ကိုရန်အောင် လုပ်နည်းကို Reference ယူပြီး ပြန်လုပ်ထားတယ်။ ကဲ ဒီမှာ လုပ်နည်းကို Download လုပ်ယူ။ ဟုတ်ပြီနော်။
nyi nyi maung said...
၀က်ဆိုဒ်ကို free လဲကြည့်လို့ရအောင်
Member လည်းဝင်လို့ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားရင်တော်တော် ကောင်းမယ်ထင်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှသူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေက ကိုယ်သိတာတွေ ကိုယ်မသိတာတွေ ဆွေးနွးဖလှယ်လို့ရတာပေါ့
အကြံပြုချက်ကို လေးစားစွာဖြင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်က ပိုက်ဆံအဲလောက် မချမ်းသာပါဘူး။ မိမိပြုလုပ်မှုတွေက တစ်ဖက်လူတွေအတွက် ထိရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာ သိရလို့ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဖျက်သိမ်းဖို့တောင် စဉ်းစားထားတာ အခုလို အားပေးမှုတွေက စဉ်းစားစရာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်။
I followes ur instructions. At the end I can do it but when i clicked on read more button, nothing happen. Is something wrong?
5:32 PM, December 21, 2012